ဘုန်းကျော်: 06/01/2011 - 07/01/2011
ဒေါ်စုခ၇ီးထွက်မဲ့ဟာက နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ်တာမျိူးဖြစ်စေချင်ပီ။
ဦးကျော်သူက ဘုန်းကြီးနဲ့ ယှဉ်ပြီး သတိလက်လွတ်ထိုင်မိတာ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကိုပုံကြီးတော့ မချဲ့ သင့်ပါဘူး။ ဦးကျော်သူကို နအဖက သိတ်ပြီး ကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုအကြောင်းပြပြီး ထောင်ထဲ ဖမ်းထည့်လိုက်အုံးမယ်။ အ၇မ်းအ၇မ်းမလုပ်ကြနဲ့ ဟေ့။ တစ်လက်စတည်း ဒေါ်စုခ၇ီးထွက်မဲ့ဟာက နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ်တာမျိူးဖြစ်စေချင်ပီ။ ပြည်ထဲေ၇းကလည်း ပါတီကို မဖျက်၇င် ဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်မဲ့ပုံပဲ။ အခုခ၇ီးစဉ်မှာ လူနဲနဲဆူတာနဲ့ ဖမ်းဖို့ အခွင့်အလမ်း၇သွားနိုင်တယ်။ အကြောင်းပြချက်ပေါ့။ ဥပဒေကို မလိုက်နာလို့ဘာညာဆိုပြီး ဖမ်းနိုင်တယ်။ ဒီတစ်ခါဖမ်းပြီးထည့်၇င် ဒေါ်စုဘဝ နိ၈ုံးချူပ်ပြီ။ အသက်က ၆၆-ဆိုတော့။ နအဖက သိတဲ့အတိုင်း တစ်ခါဖမ်း၇င် အနည်းဆုံး ငါးနှစ်ပဲ။ ၇ဝ-ကျော်၇င်တော့ သိတဲ့အတိုင်း ခေါင်းက သိတ်ပြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒလိုင်းလာမားတောင် အနားယူးသွားပြီ။ အသက် ၇၃-လား ဘာလားမသိ။ အခုခ၇ီးစဉ်မှာတော့ ဒေါ်စုအနေနဲ့လူထုကို လမ်းပေါ်တက်အောင် ပြတ်ပြတ်သားသား တ၇ားဟောသင့်ပြီ။ အချိန်သိတ်ပြီးမ၇ှိတော့ဘူး။ ဒီတစ်ခါမှ မအောင်မြင်၇င် အန်အယ်ဒီလည်း ပျက်ပြီဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့ ။ ကျနော်တို့ အားကိုးပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ လူထုက ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောမဲ့နေ့ဦးဆောင်မဲ့နေ့ ကို မျှော်နေပါတယ်။ အန်အယ်ဒီက ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှ လမ်းမပေါ်မှာ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်၇င် လူထုက အနောက်က လိုက်မှာ သေချာပါတယ်။ ဘဘတို့ လမ်းမလျှောက်နိုင်လည်း တွန်းလှည်းနဲ့ ပို့ မဲ့လူ ဆိုက်ကားနင်းပေးမဲ့လူတွေတပုံကြီး ၇ှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်ကေ၇း၇လို့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ခင်မင်စွာဖြင့် ဘုန်းကျော်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, June 29, 2011
From Inside Burma
ဒီနေ့ ၂၇.၆.၂၀၁၁ မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေ ကျောက်မျက်ဈေးထဲမှာ
ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ကျောက်ပွဲစားတစ်ယောက်ကို လည်ပင်းညစ်ပြီး
၀ိုင်းထိုးတာပါ။ အဖြစ်အပျက်က ဒီလိုပါ
ကိုမောင် (အမည်လွဲ)က အဲဒီ တရုတ်တွေဆီမှာ ကျောက်ပြခဲ့ပါတယ်
ကြိုက်ဈေးမရလို့ ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဝယ်လက် တစ်ယောက်ကို ပြတော့
ပိုပေးလို့ ရောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကို မကျေနပ်လို့ သူတို့ထိုင်တဲ့
အခန်းရှေ့ ဖြတ်သွားတော့ အခန်းထဲကို ခေါ်ပြီးတော့ တစ်ယောက်က လည်ပင်းညစ်ပြီး
ကျန်လေးယောက်က ၀ိုင်းထိုးတာပါ။ အဲဒါကို မကျေနပ်တဲ့ အတွက် ဘေးမှာ ရှိတဲ့
မြန်မာတွေက အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ ပြန်ရိုက်ပါတယ် ဖန်ခွက် တွေနဲ့
၀င်ရိုက်လို့ တရုတ်နှစ် ယောက်ကတော့ တော်တော်လေး ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
အခန်းပိုင်ရှင်က အခန်းတံခါး တွေ အပိတ်မြန်သွားလို့ သက်သာ
သွားတာပါ။အခန်းတံခါးပိတ်သွားတော့ ကျောက်ခဲတွေ နဲ့ ဆက်ထုပါတယ်။
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မှာ ကျောက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းလုံးနီးပါးရောက်လာပါတယ်။
နောက်တော့ ရဲတွေက ကားတွေ နဲ့ ထပ်ရောက်လာပြီး တရုတ်တွေကို
ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ် တရုတ် တစ်ယောက်ကို ရဲလေးယောက်က ဒိုင်းနဲ့ကာပြီး
ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ် တစ်စီးကို နှစ်ယောက်တင်သွားတာပါ။ အဲချိန်မှာ
နိုင်ငံတော် သီချင်းကိုဆိုပါတယ် ပြီးတော့ မြန်မာတွေ ခေါင်းငုံမခံဘူးကွ
ဆိုပြီးတော့ ခဲနဲ့ ထပ်ထုပါတယ် ရဲတွေ လိုက်တော့ လူအုပ်ခွဲပါတယ် ပြီးတော့
လူပြန်စုပါတယ်။ နောက်တော့ သူတို့တွေကို ခေါ်ထုတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရဲတွေခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့ အရှိန်မသေ သေး တဲ့ လူအုပ်ကြီး အခန်းကို
ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက် က ၄ နာရီကျော်
ဈေးပိုပေးပြီးဝယ်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာ
အခန်းပိုင်ရှင်တွေ ကတရုတ်တွေဝယ်ရင် ရောင်းတဲ့လူဆီက မုန့်ဖိုးဆိုပြီးတော့
တောင်းပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက်တော့ တရုတ်တွေ
ရောက်ပြီး ၇လလောက်အကြာမှာ မြန်မာ ၀ယ်လက်တွေ မရှိသလောက် ရှားသွားပါပြီ။
သူတို့အခန်းက တရုတ်က ကျောက်ဝယ်ရင် ရောင်းရငွေရဲ့ ၂% ဖြတ်လာပါတယ်။
ဖြတ်ယုံတင်မကဘူး တရုတ်တွေက ကလိမ်ကကျစ်လုပ်၇င်
ခေါင်းရှောင်ပါတယ်။တရုတ်တွေက ဈေးပေးလို့ ပွဲစားက ကျောက်အပ်ထားပြီး
ပိုင်ရှင်ကိုသွားမေး ပိုင်ရှင်ကေ၇ာင်းဆိုတော့ ပွဲစားက
ပစ္စည်းအပ်ပြီဆိုတော့မှ တရုတ်တွေ က ကျောက်ကိုမယူတော့တာတွေ
လုပ်လာပါတယ်။အဲဒါ ခဏခဏ ပြသာနာ ဖြစ်လာပါတယ်။အဲလိုတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့
တစ်နှစ်ခွဲက ပွဲစားတစ်ယောက်ထောင်တစ်နှစ်ကျသွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့အပတ်က
ပွဲစား တစ်ယောက် က ကျောက်တွေသွားပြတော့ မြန်မာငွေ မပါလို့ တရုတ်ငွေ ၂၀၀၀၀
ပေးပါတယ် ပွဲစားက ပစ္စည်းအပ်တော့ မယူတော့ပါဘူး။ပထမက နစ်နာကြေး မြန်မာငွေ
၂၀၀၀၀ ဘဲပေးပါတယ် နောက်အကျိုးဆောင်ကော်မတီက ကြားဝင် ညှိပေးလို့
လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ထိုင်းဝယ်လက်တွေရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြေမှာ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရောင်းချလို့မရတာ ဖြစ်သင့်ပါသလား။ ကျွန်တော့်တို့ဆီမှာ
ဝယ်တဲ့သူ သူတို့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတာကို
ငြိမ်ခံနေသင့်ပါသလား။ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ဝယ်တာ
တရုတ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိူးမှာ ဘယ်သူ့တွေမှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ။
ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံလား?? ပိတ်ဆို့တဲ့ နိုင်ငံမှာလား?? ကြာရင်
မြန်မာလူမျိူးတွေပိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Thanks for sender
-ီးပဲ နအဖကော အတိုက်အခံကော ဆိုတဲ့စာနဲ့ ပက်သက်ပြီး တုန့် ပြန်မှူ့ အမျိူးမျိူး ကြားခဲ့ဖတ်ခဲ့ ၇ပါတယ်။ လူအများကတော့ အတော်၇ိုင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အ၇က်မှူးပြီးေ၇းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့ တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ အနူးအညွတ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်နောင် ဒီလိုမဆဲတော့ပါဘူးလို့စာဖတ်သူအားလုံးအား အသိပေးပါသည်။ တခါတလေတော့လည်း ဒီလိုဖြစ်တက်ပါတယ်။ လူ့ သဘာဝလေ။ ဒီလိုတောင်းပန်ဖြစ်လာအောင် စေ့ဆော်ပေးတဲ့ အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စုနေ ကိုနေဝင်း (ABSDF နှင့် လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီဝင်) အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်၇ှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ခွင့်လွတ်ကြပေါ့ဗျာ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, June 27, 2011
၁။ ပိတ်လေ ငတ်လေမို့ဖွင့်ပေးကြပါ။
၂။ နယ်ခြားစောင့်တပ် နှင့် အဝေမတည့်မူ့ များ
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, June 25, 2011
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လန်း လေ ကောင်းလေပဲ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်အကြီးဆုံးအတိုက်အခံကို ပြပါဆိုရင် မြန်မာပြည်က NLD ကိုပြရပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရက အာဏာရှင်လုပ်တော့ အစိုးရကို အားရပါးရ ဝေဖန်ကြတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က မှားနေတဲ့ဟာကို ဝေဖန်ပြီဆိုရင် ဒီကောင် အတော်စော်ကားတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဝေဖန်တဲ့အခါမှာ ဒဲ့ဒိုးဝေဖန်တာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ကျနော်က သတ်မှတ်တယ်။ လေဖန်းဒန်းစီးတဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေကို တခါတလေကြားရတယ်။ ဒါတွေကတော့ မင်းက ဘာလုပ်နေတာလဲ။ မင်းလာလုပ်ပါလားဆိုတဲ့ လေဖန်းဒန်းစီးတဲ့အရာတွေကို နိုင်ငံရေးလောကမှာ အတွေ့ ရအများဆုံး။
ဒါကို ကျနော်က ကျပ်မပြည့်တဲ့ နိုင်ငံရေးငကြောင်တွေလို့ သတ်မှတ်တယ်။
အခုတော့ ဆက်ပြီးဝေဖန်ပါအုံးမယ်။ အထက်ကပြောသလို NLD ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကို ကြည့်ပါ။ အသက်အရွယ်တွေအတော်ကြီးကို အိုမင်းနေကြပြီ။ ဒီလောက်အရွယ်အထိ ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကို အားတက်သရောလုပ်နေတာကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ သို့သော် အလုပ်မဖြစ်ယုံတင်မကဘူး၊ အားတက်စရာလည်း မရှိဘူး။ အမေရိကန် သမ္မတကိုကြည့်ပါ။ အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုကြည့်ပါ။ အနည်းဆုံး အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံက ၀န်ကြီးချုပ်ကို ကြည့်ပါ။ ရုပ်ရည်နဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်က မြန်မာပြည်က NLD ထက်အများကြီးကွာတယ်။
ဘဘဦးဝင်းတင်ကိုကြည့်ပါ။ ဘဘဦးတင်ဦးကိုကြည့်ပါ။ ရေတောင် ထောင်းသောက်ရမဲ့အရွယ်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ ဒီလိုအနေအထားတွေက တစ်ယောက်တလေဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ အခုဟာက NLD ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုထဲမှာ ဒီလိုအိုမင်းနေတဲ့လူကြီးတွေက အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ သူတို့တွေကို နာယကလိုမျိုး၊ အကြံပေးလိုမျိုးထားလို့ မရဘူးလားမသိ။ ဒေါ်စုကပဲ အငယ်ဆုံးလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နှစ်ပေါင်း ၂၀-ကျော်ကြာတဲ့အထိ အိစိ အိစိဖြစ်နေတာလို့ သုံးသပ်နိုင်တယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ လူလတ်ပိုင်းတွေနဲ့အစားထိုးဖို့လည်း အစီအစဉ်မရှိဘူးထင်တယ်။ ညီလာခံလုပ်ဖို့လည်း အစီအစဉ်မရှိ။ ခေါင်းဆောင်သစ်တွေကို အစားထိုးဖို့လည်းမလုပ်။ ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးသွားနေကြမှလားမသိ။
နိုင်ငံရေးမှာ စည်းရုံးရေးသည် အဓိက။ လူတွေကိုစည်းရုံးတဲ့အခါမှာ လူတွေအားတက်အောင်၊ သွေးကြွလာအောင် ပြောဆိုစည်းရုံးရတယ်။ အခု NLD က ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦးစတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရတာ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစရာမကြောင်းကိုမရှိဘူး။ ပြောရရင်တော့ မလန်းဘူးပေါ့။ ဦးဝင်းတင်ခင်ဗျာ အင်္ကျီကလည်း မိုးပြာရောင်တစ်ထည်ပဲရှိလားမသိ။ နိုင်ငံခြားက အတိုက်အခံတွေရဲ့ လူပုံစံကို ကြည့်ရတာ အတော်ကောင်းတယ်။ ငယ်တယ်။ ကျွတက်တယ်။ မိန့်ခွန်းပြောရင်တောင် အသံကို မြှင့်တင်ပြီးပြောတယ်။ ပြတ်သားတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်ပမီဒီယာမှာအင်တာဗျူးတွေကို သတိထားပြီး နားထောင်မိတယ်။ဘဘ ဦးဝင်းတင်တို့၊ ဘဘဦးတင်ဦးတို့ ဗျူးတဲ့အသံတွေက အားတက်စရာမရှိ။ အသံက တုန်တုန်နဲ့။
ပြောရရင်တော့ NLD ကို ညီလာခံခေါ်ပြီး ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေရွေးစေချင်တယ်။ ဘဘတို့ရယ် အသက်ကြီးပြီးဆိုတော့ တရားလေးဘာလေးထိုင်ပြီး၊ လိုအပ်မှ အကြံပေးလုပ်ပေးပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့ လူတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံစေချင်တယ်။ ဒါမှ ဒေါ်စုအလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပြီးထိရောက်မှာပေါ့။ စစ်အစိုးရကြတော့ အာဏာကို ရာသက်ပန်ယူထားတယ်လို့ဆိုပြီဝေဖန်ကြတယ်။ ကိုယ်ကြတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀-ကျော်လည်း အာဏာယူထားတုန်း။ ကိုယ့်မျက်နှာလည်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်ကြပါအုံးဗျာ။
အခု ဒေါ်စု ခရီးထွက်မယ်။ ကောင်းတယ်။ ဒေါ်စု ခရီးထွက်သလို ဦးဝင်းတင်တို့ ဦးတင်ဦးတို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လိုက်နိုင်တော့မှာလဲ။ အမှန်မှန်ဆိုရင် အားလုံးတစ်စုတစ်စည်းတည်း အင်နဲ့အားနဲ့ စည်းရုံးရေး လုပ်သင့်တယ်။
အသက်အရွယ်ကိုထောက်ပြီး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဘူးဖြစ်နေတာ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အလုပ်ဖြစ်တော့မှာလဲဗျာ။ NLD အာဏာရရင်တောင် ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မလဲ။ ပြည်တွင်းထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ လူတွေဟာ စာတွေ့ရေဒီယိုအတွေ့လောက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမလဲ။သူများနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင် ကမ္ဘာပတ်ပြီး လေ့လာတယ်။ သင်ယူတယ်။ အသစ်အသစ်တွေကို လက်ခံတယ်။
ငယ်တဲ့အခါကြတော့ လုပ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေက ထောင်ထဲမှာ ငပိနဲ့ညားလိုက်၊ အထုခံလိုက်နဲ့ ခေါင်းတွေလည်း သိတ်ပြီးကျပ်မပြည့်ချင်တော့ဘူး။ နှလုံးသားမှာလည်း ဒဏ်ရာတွေ၊ နာကျဉ်းမှုတွေနဲ့။ ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီး။ စာရင်းသာမတင်ပြနိုင်တာ။ ဒီလိုဟာတွေကလည်း နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့ မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာပဲ။ တခါတလေ စစ်အစိုးရကိုချည်း အပြစ်ပုံချလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က အားနည်းချက်ကိုလည်း ကြည့်သင့်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံခြားကို ပုံမှန်ထွက်ပြီး လေ့လာသင့်တယ်။ အပြင်ကနေ ကြည့်တော့ ပိုပြီးမြင်ရတယ်။ အထဲထဲမှာပဲဆိုတော့ ဒါနဲ့ပဲလုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်နှစ်တစ်ခါလောက် Holiday ထွက်သင့်တယ်။ စိတ်လန်းကိုယ်လန်းဖြစ်အောင် ၀ိုင်လေး ဘီယာလေးချသင့်တယ်။ စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိရင် စဉ်းစားရတာကျပ်တယ်။ အတွေးသစ်အမြင်သစ်မထွက်ဘူး...ဘဘတို့ရဲ့ ။ အခုတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က နိုင်ငံရေးသမားတွေက စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိတော့ နှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာ၊ ခေါင်းက ဒဏ်ရာတွေ တထောကြီးနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Night Club ပါ သောကြာနေညတိုင်းသွားသင့်တယ်။ ပျော်ပျော်ပါးပါး Dance လုပ်ကြပေါ့။ မရီနဲ့ဆရာ။ ဒါတွေက တကယ်လိုအပ်တယ်။
တချို့ တွေပြောကြတယ်။ ရန်သူကိုရန်သူလိုပဲဆက်ဆံရမယ်တဲ့။ ဒီလိုအသုံးအနှုံးကိုက မှားနေတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မဆို တည့်အောင်ပေါင်းသင့်တယ်။ နအဖက စစ်ဗိုလ်တွေလည်း မြန်မာပြည်သားတွေပဲ။ ကျနော့်ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက်တွေထဲမှာ ရုရှက စစ်ဗိုလ်တွေရှိတယ်။ ကျနော်နဲ့သူတို့ အပြန်အလှန်စကားပြောကြတယ်။ သူတို့လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြောတယ်။ သူတို့ထင်မြင်ချက်ကို သူတို့တင်ပြတယ်။ ကျနော်လည်း ကျနော့်ထင်မြင်ချက်ကို တင်ပြတယ်။ ဖလှယ်တယ်။ ဒီလိုများများပြောမှ ညှိလို့နှိုင်းလို့ ရမယ်လို့ထင်တယ်။ အပေးအယူမရှိပဲနဲ့ ဘယ်အရာမှ မအောင်မြင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးဆိုရင် ပိုဆိုးပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ရဲ့ အဓိကပြသနာက နအဖလိုချင်တဲ့အရာကို မပေးနိုင်လို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး မရတာပဲ။ ဒေါ်စုကိုသာသူတို့ အသိအမှတ်မပြုရင် ရှင်းထုတ်လိုက်တာကြာပီ။ အသိအမှတ်ပြုလို့ယနေ့အချိန်ထိ အသက်ရှင်ခွင့် ဆက်ပေးနေတာပေါ့။ အတိုက်အခံရှိမှ နအဖလည်း နိုင်ငံရေးကစားလို့ ရမယ်လို့ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်က မှတ်ချက်ပေးဘူးတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း သူတို့ဘာလိုချင်လဲသိရင် ပေးကိုပေးနိုင်ရမယ်။ သူတို့က အာဏာရှိတဲ့အခါကြတော့ ပိုပြီးမာန်တက်တာပေါ့။ တခါတလေ အောက်ကျို့ သင့်ရင် အောက်ကျို့ ရမယ်။ လူ့အောက်ကျို့ လို့ လူပိပြီးမသေပါဘူး။ အဓိက ပြေလည်ဖို့ ပဲ။
တချို့ တွေ ပြောသေးတယ်။ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက အုံးနှောက်မရှိဘူးတဲ့။ စစ်လည်းမတိုက်ဘူးပဲ ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ့်ဘက်အခြမ်းက ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါအုံး။ သူပုန်ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး ဘယ်နှစ်ခါစစ်တိုက်ခဲ့ဘူးလဲ။ အများစုက ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာ။ ကျနော်ကတော့ ထင်တယ်။ကိုယ့်ဘက်အခြမ်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ပဲဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်ပြီး အထင်ကြီးစရာ၊ အားကျစရာ၊ မရှိပဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို သတိထားပြီး ကြည့်မိတယ်။ စိတ်ထားလေးတော့ ကောင်းရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထင်ကြီးစရာမရှိဘူး။ အများစုကို ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်။ ငွေရေးကြေးရေး ချမ်းသာလား။ ပညာတက်လား။ အားလုံးနီးပါး ငမွဲတွေချည်းပဲ။ လူတွေရဲ့ ထုံးစံက အထင်ကြီးစရာမရှိပဲနဲ့ လာပြီးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာလို့လူတွေအထင်ကြီးလဲ။ သူဘာ့ကြောင့် လူတွေက ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ထားကြလဲ။ ရှင်းနေတာပဲ။ အဓိက ဒေါ်စုဟာ ဗိုလ်ချုပ်သမီးဖြစ်တယ်။ ဘိုလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လွှတ်နိုင်တယ်။ ပညာတက်တယ်။ အာတာလည်းကောင်းတယ်။ ငွေလည်းရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ လူတွေအထင်ကြီးတယ်။ ထောင်ကျခံပြီး အနစ်နာခံပါဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားငကြောင်တွေသတိထားရမှာက ၀ မရှိပဲ ၀ိ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပဲ။ လေနဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။
ကျနော့်အလုပ်ထဲမှာ အဖြူတွေဒေါ်စုကို သိတယ်။ လူတိုင်းသိတယ်။ ဘာ့ကြောင့် သူ့ ကိုသိလဲဆိုတော့ ဒေါ်စုရဲ့ ယောက်ျားက အဖြူဆိုတော့ သူတို့အချင်းချင်းစာနာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒေါ်စုနိုင်ငံတကာမှာ တိုးပေါက်သွားတယ်။ ဒေါ်စုသာ မြန်မာယူကြည့်။ ဒီလောက်ထိဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ။ တခါလောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ကိုမေးချင်တယ်။ လောလောဆယ် ဒေါ်စုကို ဘယ်သူထမင်းကျွေးလဲလို့။ ဘယ်က ငွေရလဲမသိဘူး။
ဂျပန်မ တစ်ယောက်က ဒေါ်စုအကြောင်းရေးထားတဲ့စာကို ဖတ်ကြည့်မိတယ်။ အရင်တုန်းက သူတို့အိမ်စီးပွားရေး အဆင်မပြေဘူးလို့ရေးထားတယ်။ ဒါက နိုင်ငံခြားမှာနေတုန်းက။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ချက်စားရတယ်။ ကိုယ့်အ၀တ်ကို ကိုယ်လျှော်ဝတ်ရတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ့်အိမ်သာကို ကိုယ်ဆေးရတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အတော်အနေကြာခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြားက လူတွေကိုမေးကြည့်။ သူလိုကိုယ်လိုပဲ ဆက်ဆံသဘောထားတယ်။ ဘူးသီးကျော်တောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျော်စားရတယ်။ စားချင်တဲ့ မုန့် ဟင်းခါးကို ကိုယ့်ဟာကို ချက်စားရတယ်။ အခု ဒေါ်စုက ပြည်တွင်းမှာဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်စရာတောင်မလိုဘူး။ ဘုရင်လို နေရတဲ့ဘ၀။ ဘယ်လောက်နေချင်စရာကောင်းလဲ။
ဘေးနားမှာ ခိုင်းလို့ရတဲ့လူတွေနဲ့ဘာနဲ့။ အဆင်ကိုပြေလို့။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးက သာယာချင်စရာ။ ကျနော်လည်း ဒါမျိုးဖြစ်ချင်လိုက်တာ။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူတစ်ဦးပါ။ သာမန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ ဘာမှ စွပ်ပြီးအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူး။ မြန်မာတွေက နာမည်ကြီးပြီဆိုရင် သိရတာနဲ့တင် ဂုဏ်ယူနေတယ်။ လူကို လူလိုပဲမြင်ကြစမ်းပါ။
ကျနော်တွေ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်။ NLD က နိုင်ငံရေးသမားတွေဒေါ်စုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွဲရိုက်...ပြီးရင် ယူအန်လျှောက်၊ နိုင်ငံခြားထွက် သိတ်ပြီးအဆင်ပြေကြတယ်။ အတော်ရောင်းကောင်းတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
အခုလဲအတော်ပိန်သွားပြီ။ သူ့ ခင်ဗျား သနားဖို့ကောင်းတယ်။ အတော်အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်ပြောတာ...အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေများတော့ ဘာမှအလုပ်ကို မဖြစ်ဘူး။ တစ်ယောက်တည်းပဲ ပင်ပန်းတယ်။ ဒေါ်စုသာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြန်ကြကြည့်။ ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါက ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ လူတွေလို့ပြတယ်။ ခေါင်းဆောင်သာမရှိကြည့်။ သွားပြီ။ သူများနှခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှင်နေကြတယ်။ အဲဒါ အရည်အချင်းရှိတဲ့ NLD လား။
ဆိုတော့ အိုမင်းရင့်ရော်နေတဲ့ လူတွေကို အနားယူဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ အနားမယူချင်ရင် ဖြုတ်ချကြပါ။ နိုင်ငံရေးမှာခေါင်းဆောင်တွေ မလန်းရင် ငယ်သားတွေလည်း လန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ အချိန်တန်ရင်တုန်းမကဘူး နောက်တောင်ကျနေပါပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, June 20, 2011
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, June 18, 2011
ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးမယ်ဆိုပြီးကြံခဲ့တာ အခုမှရေးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်အဖြစ်မှန်ပါ။
၈-တန်း၊ ၉-တန်းနှစ်လောက်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့ အကြုံလေးပါ။ ကျနော်တို့ နေခဲ့ဘူးတဲ့ တပ်ထဲက အကြောင်းပေါ့။ ရဲဘော်တွေနေရတဲ့ နေအိမ်လေးတွေကို ခြောက်ခန်းတွဲလို့ခေါ်တယ်။ ပျဉ်ထောင်၊ သွတ်မိုးနဲ့ပါ။ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးဆိုတာက နာမည်ပဲရှိတယ်။ တခါတလေ ၀ါး တွေပါကူပြီးထောက်ထားရတဲ့အထိ ဆိုးရွားလှတဲ့ ခြောက်ခန်းတွဲလေးပေါ့။
နှစ်ပေါင်း သုံးလေးဆယ်ရှိပြီဆိုတော့ ပျဉ်လဲမထောင်နိုင်တော့ဘူး၊ သွပ်လဲ မမာနိုင်တော့ဘူး။ အကုန်လုံး ပေါက်ပြဲ၊ ချ စားခံရတဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်ခြောက်ခန်းတွဲအုပ်စုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ခြောက်ခန်းတွဲ လေးခုရဲ့ အလည်ခေါင်တည့်တည့်မှာ အုတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ရေကန်ရှိတယ်။
သုံးမီတာပတ်လည်လောက်ရှိမယ်။ ဒီရေကန်မှာ စုပေါင်းရေချိုးရေခပ်ကြပေါ့။ ၂၄-နာရီလုံး ရေကအမြဲလာတယ်။ ရေပြည့်လည်း လာနေတာပဲ။ ပိတ်စရာမရှိ၊ ဒီအတိုင်းပစ်ထားတဲ့ရေကန်။ ရေညှိ၊ ရေမှော်၊ အညစ်အကျေးတွေလည်း အပြည့်။ ရေကန်က ရေပိုက်တွေကလည်း ပေါက်တာများလို့ ဖာရာတွေချည်းပဲ။ လမ်းဘေးက ပလတ်စတစ်နဲ့လည်း ကောက်ပြီး ဖာရတာပဲ။ လက်တလောအဆင်ပြေအောင်။ အဲဒိရေကန်က ကျနော်တို့ရဲ့ တခုတည်းသော ရေကန်။ ရေချိုးရေခပ်ကြတယ်။ ရေကန်နဲ့ ခြောက်ခန်းတွဲက ၁၀-မီတာလောက်ပဲဝေးတယ်။
ကျနော်တို့အခန်းတွေက အတော်လုံခြုံတယ်။ ဘေးအခန်းက စကားပြောရင်၊ တခြားဘေးအခန်းကကြားရတဲ့အထိ ဒီလောက်လုံခြုံတဲ့အခန်း။ ဒါ့ကြောင့်ရဲဘော်တွေ၊ သူတို့သားသမီးတွေဆိုရင် အတင်းပြောလို့မရဘူး။ အားလုံးကြားနေရတာဆိုတော့။
အခန်းတစ်ခန်းက ဘယ်လိုအခန်းလဲ၊ ဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြမှရမယ်ထင်တယ်။ ပေ နှစ်ဆယ်ပတ်လည်ရှိတဲ့ အိမ်ရှေ့ ခန်း၊ ပေ ၂၀-လောက်ရှိတဲ့ အိပ်ခန်း။ ရှားပါးပါး ဒီနှစ်ခန်းပဲရှိတယ်။ ကိုယ့်ငွေကို ကိုယ်သုံးပြီး ကြိုက်သလိုသာ အခန်းဖွဲ့ နေတော့။ ဒါက ကျနော်တို့ နေခဲ့ဘူးတဲ့ ခြောက်ခန်းတွဲက အခန်းတစ်ခုပေါ့။ ဒု-အရာခံဗိုလ်ကစလို့ တပ်သားအထိ ဒီလိုအခန်းမျိုးမှာနေရတယ်။ အရာရှိတွေကတော့ သီးခြားအိမ်လေးတွေနဲ့ပေါ့။ အရာရှိနဲ့ ရဲဘော်မတူ။ အရာရှိတွေရဲ့ ဟိုဟာက ပိုကြီးတယ်ဆိုတော့။ ဒီလိုမျိုးခွဲခြားခံရတယ်။ ထားတော့။ ပြောချင်တာကို ဆက်ပြောပါရစေ။
ကျနော်တို့က ဒါကို လိုင်းခန်းလို့ခေါ်တယ်။ အစွန်ဆုံးအခန်းမှာ ကျနော့်အချစ်တော်ကြီး ပဲပဲဆိုတဲ့ လူရှိတယ်။ သူ့နာမည်အရင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့ကို ချစ်စနိုးပေးထားတဲ့နာမည်။ သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကိုလည်း ကျနော်မသိဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၁၈-နှစ်လောက် သူနဲ့အတူ နေခဲ့တာတောင် မသိဘူး။ စကားပြောလိုက်ရင် ပဲပဲ ဆိုတဲ့အသံကလွဲရင် ကျန်တဲ့အသံမထွက်ဘူး။ စကားမပြောတက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့။
သူက အသက် ၃၀-အရွယ်။ လူကောင်ကသေးသေး။ အရပ်က ဗေလုဝ လောက်ပဲရှိမယ်။ အ၀တ်အစားဝတ်ရင် သေသေသပ်သပ်ဝတ်တယ်။ ကျားထိုးကစားတော်တယ်။ သူနဲ့ သူ့အမေ က သူ့ညီမအိမ်မှာ မှီလိုပြီး နေတယ်။ ယောက်ဖက တပ်ကြပ်ကြပ်ကြီး။
ရေကန်ဘေးမှာ သူနေတော့ သူ့ ရဲ့ တာဝန်ကို သူသိတယ်။ရေကန်ကို တပတ်တခါသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ်။ ဘယ်သူမှ သူ့ ကို ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ညနေပိုင်းကျောင်းက ကျနော်ပြန်လာပြီဆိုရင် သူ့ အိမ်ဘေးက ဖြတ်ပြီးမှ ကျနော့်အိမ်ကိုရောက်တယ်။ နေ့တိုင်း ကျနော့်အတွက် ထမင်းရည်ကို ပဲပဲ ကသိမ်းထားပေးတယ်။ ကျနော်ပြန်လာပြီဆိုရင် သူနဲ့ကျနော် ထမင်းရည်အတူတူသောက်ပြီး ကျား ထိုးတယ်။ ကျနော်ပဲ အမြဲရှုံးတယ်။ ကျားထိုးဖော်မရှိလို့ ကျနော့်ကို ဖားတဲ့အနေနဲ့ ထမင်းရည်တိုက်တဲ့သဘော။ ဒီလောက်ထိအောင် သူချမ်းသာတာ။
သူ့ ညီမက အိမ်မှာ အခန့် သား။ ဘာမှမလုပ်။ လေးနှစ်အရွယ် သူ့ သမီးလေးကိုတောင် ကောင်းကောင်းမထိန်းဘူး။ ငအ ဖြစ်တဲ့ ပဲပဲနဲ့ကျန်းမာရေးချူချာတဲ့ မိခင်အိုကြီးကပဲ ထိန်းကျောင်းတယ်။ ပဲပဲယောက်ဖက တပ်တွင်းရိက္ခာဂိုဒေါင်ကိုင်တယ်။ ဆီကိုင်တဲ့လက် ဆီပေတဲ့ထုံးစံရှိတော့ သူတို့အိမ်လဲ စီးပွားရေးအဆင်ပြေပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ပဲပဲက ထမင်းချက်တာ၊ အ၀တ်လျှော်တာ နောက်ကြရင် ပဲပဲကို ညီမဖြစ်သူက ထမင်းမကျွေးဘူး။ ဆဲဆဲဆိုဆိုနဲ့ အမြဲတမ်းဆူပူကြိမ်းမောင်းတယ်။ သူတို့အိမ်မှာ ထမင်းအိုးနှစ်လုံးထားတယ်။ တစ်လုံးက ပဲပဲစားဖို့ ထမင်းအိုး။ နောက်တစ်လုံးက ညီမနဲ့ ယောက်ဖြစ်သူတို့အတွက်။ ပဲပဲအတွက် ဆန်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း၊ တပ်တွင်းကရတဲ့ ငစိန်ဆန်။ သူတို့ကတော့အကောင်းစားပေါ့။ တခါတလေ ပဲပဲလည်း လစ်ရင်လစ်သလို ညီမနဲ့ယောက်ဖဖြစ်သူဆီက ပိုက်ဆံခိုးပြီး စီးကရက်ဝယ်သောက်တယ်။ ကျနော်ကိုလည်း တိုက်တယ်ပေါ့။ ဆေးပေါ့လိပ်ဆိုရင် သူမသောက်။ ဒါက ပဲပဲရဲ့ ဘ၀တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
ကျနော့်ထက် ၁၀-နှစ်လောက်ကြီးတဲ့အောင်မိုးဆိုတဲ့လူလည်း ခြောက်ခန်းတွဲမှာနေတယ်။ အဖေက ရဲဘော်။ အမေက ပဲပြုပ်သည်။ သို့သော်သူတို့ ချမ်းသာတယ်။ ပဲပဲက ငအ။ အောင်မိုးက အကန်း။ မျက်လုံးမမြင်ဘူး။ မမြင်ပေမဲ့အရမ်းသန့် တယ်။ ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်လဲတော့မသိဘူး။ တအိမ်လုံးပြောင်နေအောင် တံမျက်စီးလှည်းနိုင်တယ်။ အုတ်ကန်ကနေ အိမ်အထိ ဘယ်သူအကူမှ မပါပဲ ရေခပ်နိုင်တယ်။ အောင်မိုးမမွေးခင်တုန်းက သူတို့မိသားစု အရမ်းဆင်းရဲတယ်။ အောင်မိုးကိုမွေးပြီး သူတို့စီးပွားဖြစ်လာတော့ မျက်လုံးမမြင်တဲ့သူတို့သားကို ကျေးဇူးရှင်လို့ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတယ်။
ပဲပဲနဲ့အောင်မိုးက မတည့်အတူနေ။ သူတို့ကြားမှာ ကျနော်ကစကားပြန်။ ပဲပဲ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြောတာကို ကျနော်က အောင်မိုးကို ဘာသာပြန်ပေးရတယ်။ အောင်မိုးက မမြင်ဘူးဆိုတော့။ တခါတလေ အောင်မိုးပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်ပြီး ပဲပဲလုပ်တာဆိုပြီး ကြပ်ပေးတော့ ပဲပဲနဲ့အောင်မိုးရန်ဖြစ်ကြတာကို ကျနော်က သဘောကြတယ်။
တနေ့တော့ သူတို့နဲ့ ကျနော် မမျှော်လင့်ပဲကွဲသွားခဲ့တယ်။ သူတို့လည်း ဟိုရောက်ဒီရောက်၊ ကျနော်လည်း ဟိုရောက်ဒီရောက် ဘ၀စာမျက်နှာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လှန်နေရတုန်း။ အခုဆိုရင် ၁၄-နှစ်လောက်ရှိပြီ။ သတိတရရှိလို့ တပ်ထဲက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို အောင်မိုးနဲ့ပဲပဲအကြောင်းကို ပြန်မေးမိတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာလား၊ ၀မ်းသာစရာလားတော့မသိဘူး။
ပဲပဲဆုံးသွားပြီ။ သူ့အမေက သူ့ ထက်အရင်ဆုံးတယ်။ သူ့ အမေမသေခင်မှာ သူ့သားကို စိတ်မချဘူးဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့တယ်။ ပဲပဲရဲ့ ညီမဖြစ်သူလည်း အိမ်ထောင်ကွဲပီး ဘ၀ပျက်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၀မ်းသာစရာသတင်း ကြားရပြန်တယ်။ အောင်မိုးတို့ မိသားစု ရွှေပေါက်ကန်မြို့ သစ်မှာ တိုက်နဲ့ ကားနဲ့ ကြီးပွားနေတယ်တဲ့။ သြော်....ကျေးဇူးသိတက်သူတို့ကြီးပွားပြီး ကျေးဇူးကန်းသူတို့ ဘ၀ပျက်ကုန်ကြတဲ့ လူ့ လောကပါလား။ လောကကြီး တရားပါတယ်။ ဒီလိုပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ယှဉ်ပြီး နိုင်ငံရေးကိုလည်း သတိထားပြီးကြည့်မိတယ်။ ကျေးဇူးကန်းသူများဖြစ်တဲ့ ဦးနေ၀င်းတို့၊ ဦးခင်ညွှတ်တို့ ဘ၀ပျက်ခဲ့ကြပြီ။ နောက်ဘယ်သူတွေများ လောကကြီးရဲ့ ဒဏ်ခတ်တာကို ခံရမလဲမသိဘူး။ ဦးသန်းရွှေလား၊ ဦးသိန်းစိန်လား၊။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းအစရှိရင် ဇာတ်လမ်းအဆုံးတော့ရှိရမယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, June 17, 2011
ဦးသိန်းစိန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချူပ်တို့ လက်ဆွဲနုတ်ဆက်နေပုံဖြစ်ပါတယ်။ သမတဖြစ်ပြီး ခြောက်လအတွင်းမှာ ဒီလောက်တောင် ပိန်သွားပါလား။ နောက်ခြောက်လဆို...ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူး။
ရေးသားသူ - ---- at Monday, June 13, 2011
ခေါင်းဆိုဆိုတဲ့လူက ပြတ်သားပေါ့။ အခုတော့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ ။ အစိုး၇ကို break down မလုပ်ချင်ဘူး။ change ပဲလုပ်ချင်တယ်လို့သြစီဝန်ကြီးချူပ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ ကိုယ့်နေ၇ာက ဘယ်ေ၇ာက်နေလဲမသိ။ နှစ်ပေါင်းလည်း ၂ဝ ကျော်ခဲ့ပြီ။ အခုထိ ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ ပဲ။ အလုပ်မဖြစ်တာလည်းသိသိကြီး။ ဦးဝင်းတင် ဦးတင်ဦး ဒေါ်စုတို့ ဦးဆောင်ပြီး လမ်းမပေါ်မှာ ဒို့ အေ၇းအော်ဖို့ လည်း မလုပ်။ တောခို ပြီး စစ်တိုက် ဗုံးခွဲဖို့ လည်း အစီအစဉ်မ၇ှိ။ေ၇ွးကောက်ပွဲကိုလည်း အသေကြောက်။ အသက်လည်း တဖြည်းဖြည်း သေဖို့ ဖင်နားကပ်နေပြီ။ ဒါလည်း တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးေ၇းတောင်းတုန်း။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့ မ၇ ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ဘာမှ အပိုတွေလျှောက်ပြီး ပြောနေစ၇ာကို မလိုဘူး။ ပြည်သူတွေကလည်း ငတုံးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံး ကျနော့် သုံးသပ်ချက်က ဒေါ်စုနဲ့NLD ဒီလိုဆက်သွားနေ၇င် ဒေါ်စုသေသွားတဲ့တနေ့NLD ဆိုတာ ၇ှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိ၇င် ဆက်ဆက်ထိမခံနိုင်သူများခင်ဗျား....ဒေါ်စုက တနေ့ ချီးသုံးခါစားကြဟေ့ ဆို၇င် အား၇ပါး၇ စားကြပါဗျာ။ အစိုး၇ကို ကြိူက်လို့ ဒီစာေ၇းနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော ခင်ဗျားတို့ကျပ်မပြည့်တဲ့ အုံးနှောက်တွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Sunday, June 12, 2011
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အခမ်းအနားကို တကမ္ဘာလုံးမှကျင်းပကြရာတွင် ယခုပူးတွဲပါဓါတ်ပုံကိုသာလျှင်
contact-John yoe info.nldburma@gmail.com
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, June 11, 2011
ဂျွန်လ ၁၉-ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်မည်ဖြစ်သောအဖေနေ့အတွက်ရည်ဇူး၍
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှာ လဥ တစ်လုံးပဲရှိတယ်တဲ့...
အသက် ၆၅-နှစ်အရွယ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်
ဒေါ်စုဟာ အတွေးအခေါ်ပညာ၇ှင်လိုလို တ၇ားသမားလိုလို ဖြစ်လာနေပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၇ဲ့ ပြည်သူတွေကို နိုင်ငံေ၇းမှာ လုပ်မှ ၇မယ် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ အလုပ်၇ှိမှ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်။ အားလုံးလုပ်မှ မြန်မြန်ခ၇ီးေ၇ာက်မယ်။ ဘာညာ အာပလာ ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီလိုတွေးမိတယ်။ ဒီလို ပြောဆိုချက်တွေဟာ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ ဆေးလိပ်စွဲတဲ့လူ အ၇က်စွဲနေတဲ့လူတွေကို မီဒီယာကနေ အ၇က်သောက်၇င် ဆေးလိပ်သောက်၇င်ေ၇ာ၈ါ၇တယ် ဒါ့ကြောင့်မသောက်သင့်ဘူး ဖြတ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ ဆေးလိပ်သမား အ၇က်သမားတွေကလည်း ထုံးစံအတိုင်း စောက်၈၇ုမစိုက်ပဲ သောက်တာပဲ။ ဒေါ်စုဟာ အတွေးအခေါ်ပညာ၇ှင်လိုလို တ၇ားသမားလိုလို ဖြစ်လာနေပြီ။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်မဟုတ်တော့ဘူး။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, June 01, 2011
ဒေါ်စုခ၇ီးထွက်မဲ့ဟာက နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ်တာ...
ဒေါ်စုဟာ အတွေးအခေါ်ပညာ၇ှင်လိုလို တ၇ားသမားလိုလို ဖြ...